Ibiaghachi ọnụego, oge na saịtị na omume Nsuso | Martech Zone
Wednesday, October 12, 2011 Fraịdee, June 13, 2014 Douglas Karr
A ka nwere ọtụtụ nghọtahie nke nkọwa nke ọnụego ibiaghachi, olee otu o si emetụta saịtị gị nke ọma, yana otu ị ga - esi rụọ ọrụ iji meziwanye ya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime gị na-eji Google Analytics, nghọta nke otu Google si emeri ibiaghachi dị mkpa.
Nke mbụ, ị nwere ike ọ gaghị amata ya mana Nkezi oge na saịtị n'ihi na ndị nleta bounced na-atụkarị efu. Yabụ, dị ka ị na-ele Nkezi oge na saịtị, ọ na-egosi naanị oge ejiri na saịtị gị maka ndị ọbịa ahụ egbula. Nke ahụ yiri ka ọ bụ nke m. Ọ ga-amasị m ịmara ogologo oge ndị mmadụ na-anọ tupu ha agbaa iji hụ ma m ọ dịkarịa ala na-adọrọ uche ha. O di nwute na, nke ahụ bụ ekwe omume na-enweghị ụfọdụ hacks. Nwalee ya n'onwe gi… onyonyo ebe a na-egosi na akụkọ ẹdụk maka naanị bounced ọbịa… dapụtara na a Nkezi oge na saịtị nke 0.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ma ọ bụrụ na onye ọbịa gị na ibe gị na-emekọrịta ihe ọ bụla trackable n'ụzọ (na mpụga ịhapụ), anaghị ekewa ha ka ọ bụrụ ibiaghachi! Ya mere… ma ọ bụrụ na ị tinye ihe omume na bọtịnụ egwu ma ọ bụ oku na-aga ime ihe, onye ahụ pịa ...… anaghị ekewa ha dị ka ibiaghachi. Imirikiti ndị mmadụ na-eche na ibiaghachi bụ onye ọ bụla rutere na saịtị gị wee pụọ. Ọ bụghị… ọ bụ onye ọ bụla nke dara na saịtị gị, anaghị emekọrịta n'ụzọ ọ bụla, wee pụọ.
Ọ bụrụ na ị soro ihe omume ma ọ bụ nyocha peeji ndị ọzọ na ibe, onye ahụ ga-arụ ọrụ ya agbaghị. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye njikwa azụmaahịa na-agbagha ọnụego elu elu, ọ dị mkpa ka ị hụ ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ndị ọbịa na-emekọrịta saịtị gị n'ụzọ ọ bụla tupu ha apụ. Enwere ike mezuo nke a site na itinye mgbakwunye nsuso mmemme ebe niile enwere ike.
Chee echiche banyere ihe dị na peeji ebe ị nwere ike embed nsuso ihe omume:
Ọ bụrụ na ị nwere njikọ na ibe gị nke ahụ mee ka okporo ụzọ pụọ na nzube, ị nwere ike ma ịchọrọ ịgbaso ihe omume ahụ. Ọ chọrọ obere koodu, agbanyeghị, iji hụ na ejide ihe omume ahụ tupu ị pụọ na peeji ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere a jQuery nyeere saịtị na njikwa maka ndị ọbịa iji sliders ma ọ bụ ihe ndị ọzọ mekọrịta, ị nwere ike itinye a Nchịkọta Google jQuery ngwa mgbakwunye na-eme ka ọ dị mfe iji soro ihe omume na ọrụ.
Ọzọ elu nhọrọ bụ tinye a nke abụọ Nchịkọta Google Analytics na ibe gị ma soro ihe ngosi nke abụọ ozugbo peeji ahụ na-ebu ibu. Nke a ga - ebelata ọnụego ibiaghachi na 0 na akaụntụ ahụ mana ọ ga - enye gị oge dịkarịsịrị na ntanetịime saịtị maka onye ọbịa ọ bụla. Mgbe ahụ ịnwere ike ịgbakwunye otu nke na nzacha nke ihe ngosi na-erughị 3 peeji. Nke ahụ ga-ewepụta onye ọ bụla na teknụzụ anaghị agbago ma nye gị oge na data saịtị.
Echefukwala track ụlọ ọrụ ibiaghachi udu iji hụ ka saịtị gị si atụnyere. Otu ederede - anyị na-ahụkarị saịtị nwere nnukwu ogo ogo ibiaghachi n'ọkwa dị elu karịa. Omume ndị ọbịa maka ndị na-abịa site na ọchụchọ na-egosipụta ọrụ nchọgharị karịa ebe ha na-enyocha ọtụtụ nsonaazụ ọchụchọ wee pụọ mgbe ha nwetachara ngwa ngwa nke ibe ahụ. Ya ejula gi anya ma oburu na ichota otutu uzo ahia gi ma onu ahia gi na abawanye!
Tags: ụba ọnụegoihe omumeGoogle Analyticsoge na saịtị